Manome Solika 5 Tapitrisa Litatra Ho An’i Malaoi i Zambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2012 14:08 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Español, македонски, English
Tamin'ny 2007, Michael Sata – mpitarika ny tontolon'ny fanoherana Zambiana tamin'izany fotoana – dia nandeha nanao fitsidihana tsy ofisialy tany Malaoi, saingy voaroaka teo am-pahatongavana tao an-tseranam-piaramanidin'i Chileka ary nentina tany amin'ny 400 kilometatra niala an'i Zambia. Efatra taona taorian'izay, lany ho filohan'i Zambia i Sata.
Tamin'ny fotoana nandroahana azy tany Malaoi, dia voalaza fa hoe nivazivazy i Sata fa ho an'izay diany izay dia nomen'i Bingu fiara Lexus GX efa feno solika miaraka aminà mpamily manokana izy (izany hoe, ny tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina), izay be lavitra noho ny nataon'i Levy Mwanawasa, filohan'i Zambia tamin'izany ary mpanohitra ara-politika an'i Sata.
Fotoana fohy taorian'ny nahalanian'i Sata ho Filoha dia mazava loatra fa nandeha ho azy ny fanasàna azy hanatrika ny fivorian'ireo filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny COMESA, ny Tsenabe Iombonan'ny faritra Atsimo sy Atsinanan'i Afrika. Kanefa noho ilay fihaonambe tany Malaoi no natao, toerana izay mbola mihantona miandry an'i Sata ny didy fandroahana azy, dia nandà tsy hanatrika ilay fihaonambe ny filoha vaovaon'i Zambia, nampitaina taminà iraka manokana avy any Malaoi :
“Ny Filoha Hajaina Bingu wa Mutharika dia mahafantatra tsara ny toerana saropady misy ahy. Sitrako tokoa ny handeha amin'io ho toy ny fitsidihana ofisialy ataoko voalohany any ivelany. Nihevitra aho fa hitondra ny didy fanafoanana [ ny raharaha fandroahana] ianareo, saingy tsy izany no izy. Vantany vao voavahanareo ireo olana ireo dia ho avy aho amin'ny fotoana hafa.”
Eo amin'ny toeran'i Sata, dia i Dr Guy Scott Filoha lefitra no nalefan'ny governemanta Zambiana hanatrika ilay fihaonambe. Ny fotoana voalohany nanaraka an'io nihaonan'i Sata tamin'ny mpitarika an'i Malaoi io dia tany Afrika Atsimo tamin'ny fankalazana ny fahazato taonan'ny antoko teo amin'ny fitondràna, ny African National Congress.
Tao amin'ilay lanonana, na ny mpampahalala vaovao Zambiana, na ny avy any Malaoi dia samy nitatitra ny amin'ny mety hisian'ny fihaonan'ny roa tonta. Araka izay ambaran'ny The Zambian Post :
Ny Filoha Zambiana Sata mihaona amin'ny Filohan'i Malaoi Mutharika tao Afrika Atsimo. Sary nampindramin'i ZodiakOnline
“Satria ny Filoha Mutharika, izay tonga tara nandritra ny fisakafoanana, nandalo teo amin'ny sezan'ny filoham-pirenena Zambiana teo amin'ny latabatry ny olo-manan-kaja izy, dia nitsangana ny Filoha Sata ary nifamihina ny roa tonta – izay noheverina tany am-boalohany ho toy ny mpifahavalo – , nifanakalo “tenim-pirahalahiana” ary nitokelaka.
Taorian'ny fifamihinan-dry zareo, nanontany an'i Mutharika ny Filoha Sata, “kumunzi kuli bwanji? Manao ahoana ny any an-tanàna?” ary namaly ny Filohan'i Mlaoi : “kuli bwino. Nanga mubwela liti? Mandeha tsara ka. Rahoviana ianao no ho any ( Malaoi)?
Tao anaty valinteniny, niteny tamin’ i Mutharika ny filoha Sata hoe, “tizamu uzani. Holazainay anareo ihany.”
Zambia sy Malaoi dia mifampizara teny sy fomba mitovy eny amin'ny sisintany iraisan-dry zareo, izay mitatra hatrany Mozambika ny ao atsimo ary Tanzania ny ao avaratra.
Volana vitsy tany aloha, na izany aza, dia tany Zambia i Joyce Banda (filoha lefitr'i Malaoi tamin'izany fotoana, ary filoha ankehitriny) mba hanatrika ny fankalazana ny nahazoan'ity firenena mpifanolo-bodirindrina ity ny fahaleovantena, taminà fitsidihana iray tsy dia nankasitrahan'ny fitantanan'i Bingu loatra. Rehefa tonga tany Malaoi izy, dia norahonana hosamborina noho ny filazana hoe satria tsy nahazoana alàlana tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny governemanta ao Malaoi ny fitsidihany.
Indrisy, fotoana fohy taorian'izay dia maty i Bingu filoham-pirenena, namela toekarena rotika sy tandindonin'ny tsy fahampian'ny fifanakalozana ivelany (vola vahiny), herinaratra sy solika, miaraka amin'ny nakàn'i Joyce Banda ny toerana maha-filoha.
Ny fanolorana solika ho an'i Malaoi voalaza tery ambony no voalohany amin'ny hetsika manana ny lanjany nataon'i Zambia hanekena ny governemanta vaovaon'ny Filoha Banda. Ny eso ambonin'ny eso rehetra ao anatin'ny fitantanan'i Banda dia izao, ny mpisolovava avy any Malaoi, Ralph Kasambara, mpiaro ny Filoha Zambiana Sata no Minisitry ny Fitsarana ao Malaoi izao .
Mikasika ilay fanolorana solika, ny Minisitry ny Angovo ao Zambia, Christopher Yaluma, izay nitsidika an'i Malaoi, dia niteny tamin'ny Aprily hoe :
“Ity fandefasana sambo [mpitondra solika] atrehintsika maso androany ity dia fanomezana ho enti-mikarakara fotsiny ny fandevenana ny filoha nodimandry. Omaly dia sambo 15 mpitondra solika no niainga sy tonga tany Malaoi tamin'ity maraina ity.”
Noho ny tsy fahampian'ny herinaratra handefasana ny fampangatsiahana ao Malaoi, nafindra ho any Afrika Atsimo ny vatana mangatsiakan'ny Filoha Mutharika, toerana namonosana azy ny 23 Aprily teo.